Ururka “ICAN” ee Anti-Nuclear-ka oo mutaystay Nobelka Nabadda 2017ka – Kasmo Newspaper
Ururka “ICAN” ee Anti-Nuclear-ka oo mutaystay Nobelka Nabadda 2017ka
Updated - October 6, 2017 2:03 pm GMT
London (Kasmo), Billadda Nabadda “Nobel” ee sannadkaan 2017ka ayaa si lama filaan ah loogu gartay Ururka ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) oo ah isbahaysi Bulshada Rayidka Caalamiga ah oo u ololeeya mamnuucista Hubka Nuclear.
Waa farriin cad oo ku wajahan xiisadda dabaylaha ruxaya xiriirkii Maraykanka iyo Kuuriyada Woqooyi iyo sharqanta ka soo yeereysa Donald Trump ee ka bixista Heshiiskii Iiraan.
ICAN waa urur an faa’ido doon ahayn oo fadhigiisu yahay Switzerland oo la asaasay sannadkii 2007dii, waxaa ku midaysan 468 Urur oo ka hawlgala 101 dal, wuxuuna u ololeeyaa sidii si buuxda loogu hirgalin lahaa Heshiiskii Caalamiga ahaa,“Nuclear Weapon Ban Treaty” ee la saxiixay 20kii September 2017.
Tobankii sano ee u dambaysay dadaalladii dhimista hubka halista ah waxay iska ahaayeen qaar waraaqda dusheeda isaga qoran oo qura ah.
Sannadkii 2010, Maraykanka iyo Russiya waxay ku kulmeen Prague, Caasimadda Czech Republic si loo dardargaliyo heshiisyadii xakamaynta Hubka halista ah, waxayna saxiixeen “NEW START” (Strategic Arms Reduction Treaty).
Maraykanka iyo Ruushku waxay ballanqaadeen in tirada dalkiiba ka haysto bambooyinka Nuclear-ka noqoto 1,550, iyo in isu gaynta Gantaallada nooca “Ballistic”, Gujisyada iyo diyaaradaha culus ee Nuclear-ka qaada ayan dhaafin 800.
Waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in tirada midkiiba, 2da dal, markiiba hawlgal ka noqon kara ayan ka badan 700 oo xabbo, laakiin wixii laga sugayay heshiiska lama xurmayn, waxayna ka muuqataa tirooyinka.
Maraykanku wuxuu haystaa 1,740 madax oo dhaqangal ah (Active), 2,740 kayd ah iyo 2,300 oo kale oo sugaya in la qaado. Qiyaastii 150 ka mid ah kuwa dhaqangalka ah waxay ku kala firirsanyihiin Yurub, si waafaqsan qorshaha NATO.
Qaybta kale ee mugga weyn ee Nuclear-ka waa Russiya oo in kasta oo ay ballan qaadayso dhaqangalinta Heshiiska New Start, haddana wali haysata 1,800 oo Gantaal.